အဟောင်းစားသော သူဋ္ဌေးကြီး | မေတ္တာရိပ်
နမောတဿ ဘ၀ဂတော အရဟတော သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဿ (လူ၊ နတ်၊ ဗြဟ္မာ၊ သတ္တ၀ါအားလုံး၏ ပူဇော်အထူးခံယူတော်မူထိုက်သော အလုံးစုံသောတရားတို့ကို ကိုယ်တိုင်မှန်စွာ သိမြင်တော်မူသော ဂုဏ်တော်(၉) ပါးသခင် ထိုဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးအား မြတ်နိုးလက်စုံမိုး၍ ရှိခိုးပါ၏။ "မြတ်စွာဘုရား၏ တရားတော်တို့ကို နာကြားခွင့်ရသူတို့သည် အလွန့်အလွန် ဘုန်းကံကြီးကြပါပေသည်။"(မိထွေးတော်ဂေါတမီ)
← ကံ အကြောင်း
လူလေးမျိုးနှင့် ကံ အကျိုးပေးပုံ →
Posted on September 27, 2009	by mettayate
ဗုဒ္ဓလက်ထက်က – ကျောင်းဒကာမကြီး ၀ိသာခါသည် (၇)နှစ် သမီးအရွယ်ကတည်းက သောတပန်တည်ခဲ့သည်။ သို့ပေမယ့် တိတ္တိဆရာတွေကိုကိုးကွယ်သော သူဌေးကြီး မိဂါရ၏သား ပုဏ္ဏ၀ဎုနနှင့် အိမ်ထောင်ကျခဲ့ရသည်။ ၀ိသာခါသည် ယောက္ခမကြီး မိဂါရနှင့်သူ့သားတို့အား အမြင်မှန်ရစေရန် အမြဲတန်းစဉ်းစားနေခဲ့သည်။ တစ်နေ့ မိဂါရသူဌေးကြီးထမင်းစားနေစဉ် ၀ိသာခါကအနားမှာထိုင်၍ ယပ်ခတ်ပေးနေစဉ် ရဟန်းတော်တစ်ပါး မိဂါရ၏အိမ်ရှေ့တွင် ဆွမ်းရပ်လေ၏။ ဗုဒ္ဓဘာသာအိမ်ထင်ရင် ရပ်ခြင်းသာဖြစ်သည်။ မိဂါရကား မသိချင်ယောင် မမြင်ချင်ယောင်ဆောင်ကာ ထမင်းကိုသာ ဆက်စားနေသည်။ တကယ့်ဆွမ်းကို လောင်းလှူဖို့နေနေသာသာ ကန်တော့ဆွမ်းကိုပင် လောင်းလှူခြင်းမရှိခဲ့ပါ။
ထိုအခါ သွက်လက်ချက်ခြာသော ၀ိသာခါက ရဟန်းတော်ဘက်လှည့်ကာ လက်အုပ်ချီလျှက် – “အရှင်ဘုရား – တပည့်တော့၏ယောက္ခမကြီးကား အဟောင်းကိုသာစားသည့်အတွက် ကန့်တော့ဆွမ်းပါဘုရား” ဟု ကန်တော့ဆွမ်းလောင်းလိုက်ရာ ရဟန်းတောက အေဆေးငြိမ်သက်စွာဆက်လက်ကြွသွားသော်လည်း မိဂါရသူဌေးကြီးကား အကြီးအကျယ်ဒေါသပုန်ထလေပြီ။ သူ့အား လူတို့၏အညစ်အကြေးအဟောင်းကိုစားသူဟု ပြောခြင်းသည်ကြီးကျယ်သော စော်ကားခြင်းဟု ယူဆကာ ၀ိသာခါအားအိမ်မှ နှင်ထုတ်ရန်ထိ ကြိုးပမ်လေသည်။
၀ိသာခါက အေးအေးဆေးဆေးပင် သူ၏ဖခင်က အပ်နှံထားခဲ့သောသူဌေးကြီးရှစ်ယောက်ကိုခေါ်ယူစေပြီး မည်သူကမှားသည် မည်သူကမှန်သည်ကို မျက်နှာစုံညီဖြေရှင်းစေသည်။ တခြားပြဿနာသုံးလေးခုရှင်းပြီးသည်နှင့် နောက်ဆုံးပြဿနာဖြစ်သောစကားကို ၀ိသာခါရှင်းပြသည်မှာ – “သမီးသည် အဟောင်းစားဟု ဖခင်ကိုဆိုခြင်းမှာ။ လူတို့၏အညစ်အကြေးကျင်ကြီးစားသည်ဟု ပြောဆိုခြင်းမဟုတ်ပါ။ ဖခင်သည် အတိတ်ဘ၀ကပြုခဲ့သော ဒါနကုသိုလ်ကံဟောင်းဖြင့် ယခုဘ၀တွင်ချမ်းသာသုခကို ခံစားနေရပါသည်။ ဒါနကုသိုလ်ကံဟောင်း၏အကျိုးကို ခံစားနေခြင်းကို ရည်ရွယ်ပြီးတော့ အဟာင်းကိုစားနေခြင်းလို့ ပြောဆိုခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ကုသိုလ်ကံဟောင်းကိုသာ ခံစားနေပြီး ကံသစ်ကို မပြုလုပ်တော့ဘူးဆိုလျှင် နောက်ဘ၀မှာစည်းစိမ်ချမ်းသာကို ယခုလိုခံစားရတော့မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါကို သံဝေဂရစေလိုတဲ့အတွက် ယခုလိုပြောဆိုရခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ယခုလိုဆိုလျှင် ဖခင်သမီးအပေါ် အထင်မှားနေကြသောသံသယများကို ဖြေရှင်းပြီးပါပြီ။ ဒ့ါကြောင့် သမီးကို မိဘများထံပြန်လည်နေထိုင်ခွင့်ပြုပါတော့။”
ထိုအခါမှ မိဂါရမှာ ပြာပြာသလဲဖြင့် – သမီး ၀ိသာခါ ဘယ်ကိုမှမသွားပါနဲ့။ သမီးရဲ့ဖြေရှင်းချက်များဟာ ဖခင်ရဲ့အသိဉာဏ်များကို ပွင့်လင်းစေပါတယ်။ သမီး ၀ိသာခါကိုးကွယ်တဲ့ရတနာသုံးပါးကို ဖခင်တို့လဲ ကိုးကွယ်ဆည်းကပ်ပါ့မယ်။
နောက်တစ်နေ့တွင် ဘုရားအမှူးရှိသော သံဃာတော်များကို ပင့်ဖိတ်ပြီး တရားတော်ကိုနာယူပြီးသည်၏အဆုံးတွင် မိဂါရသူဌေးကြီးသည် အယူမှားသော ဒိဋ္ဌိနှင့် ၀ိစိကိစ္ဆာပြုတ်ပြီး သောတပန်တည်ခဲ့ပါတယ်။
(ဒီဝတ္ထုကို တင်ပြရခြင်းမှာ- ဒုလ္လဘတရား ၅ ပါးထဲတွင် ပါဝင်သော ရတောင့်ရခဲလှသော လူ့ဘ၀ကို ရလာရခြင်းမှာ – ရှေးဘ၀က ကုသိုလ်ကံကောင်းခဲ့သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ရှေးကုသိုလ်ကံကြောင့် လူ့ဘ၀ရရှိသော်လည်း မိဂါရသူဌေးကဲ့သို့ အဟောင်းစားသူများဆိုရင် အားလုံးရဲ့အမြဲနေအိမ်ဖြစ်တဲ့ အပါယ်လေးပါးသို့ ပြန်ရမည်သာဖြစ်ပါတယ်လို့ သံဝေဂ​ရစေရန် ဖြစ်ပါတယ်။)
ဒါ့ကြောင့် ဆရာတော်များက ခုလိုဆုံးမတော်မူပါတယ်။
တိပိဋကရေ၊ ယောဆရာတော်ဘုရား –
ကုသိုလ်ကြောင့် လူဖြစ်လာရသည် ဖြစ်၍ လူနှင့် ကုသိုလ်၊ ကုသိုလ်နှင့်လူသည် ခွဲ၍မရချေ။
ကုသိုလ်လမ်းပျောက်ကွယ်သွားသည်နှင့် လူသည် လူ့လမ်းကြောင်းမှ ဖယ်ခွာသွားရမည် ဖြစ်သည်။
ကုသိုလ်ကို ဘယ်တော့မှ မမေ့ရ။
ကုသိုလ်ကို ကိုယ်ကမေ့ရင်၊ ကုသိုလ်က ကိုယ့်ကိုမေ့လိမ့်မည်။
ကုသိုလ်က ကိုယ့်ကို မေ့လျှင်၊ ဘေးတွေ့လိမ့်မည်။
This entry was posted in ထေရ၀ါဒ ဗုဒ္ဓဘာသာ and tagged ထေရ၀ါဒ. Bookmark the permalink.
၀ယဓမ္မာသင်္ခါရာ အပ္ပမာ ဒေနသမ္ပာဒေထ။
မမေ့ မလျော့ မပေါ့ မဆသော
"အတ္တာဟိ အတ္တနော နာထော မိမိကိုယ်သာလျှင် မိမိကိုးကွယ်အားထားရာ။"
"ယောခေါ ၀က္ကလိဓမ္မံ နပဿတိ သောမံနပဿတိ။
၀က္ကလခန္ဓာ နာမ်ရုပ်တရားကို မမြင်သောသူသည် ငါဘုရားကို မမြင်။"
"ယော စ ၀ဿသတံ ဇီဝေ၊ အပဿံ ဥဒယဗ္ဗယံ။
ဧကာဟံ ဇီဝိတံ သေယျော၊ ပဿန္တော ဥဒယဗ္ဗယံ။
လူတစ်ယောက်ဟာ အသက်တစ်ရာနေရပေမယ့် ရုပ်နာမ်တို့ရဲ့အဖြစ်အပျက်ကို မမြင်ဘူး (မသိဘူး) ဆိုရင် မမြတ်ဘူး။
လူတစ်ယောက်ဟာ တစ်ရက်တည်းနေရပေမယ့် ရုပ်နာမ်တို့ရဲ့အဖြစ်အပျက်ကို မြင်ရတယ် (သိတယ်) ဆိုရင် မြင့်မြတ်ပါတယ်။"
"သေခြင်းတရားသည် ကွေးသောလက် မဆန့်ခင်၊ ဆန့်သောလက် မကွေးခင်မှာ ရောက်လာနိုင်တယ်လို့ ဗုဒ္ဓ ဟောကြားတော်မူခဲ့ပါတယ်။"
၁) ငါသည် အိုခြင်းသဘော ရှိ၏။
၂) ငါသည် နာခြင်းသဘော ရှိ၏။
၃) ငါသည် သေခြင်းသဘော ရှိ၏။
၄) ငါ့အား ခပ်သိမ်းသော နှလုံးကိုပွားစေတတ်သော အဆွေအမျိုး၊
အဆွေခင်ပွန်း၊ ချစ်ကျွမ်းဝင်သူတို့နှင့် အရပ်တစ်ပါးသို့ ပြောင်းသွားသဖြင့်
ရှင်ကွဲ ကွဲရခြင်းသည် လည်းကောင်း၊ ဘ၀တစ်ပါးသို့ ပြောင်းသွားသဖြင့်
သေကွဲ ကွဲရခြင်းသည်လည်းကောင်း ဖြစ်တတ်ချေ၏။
၅) ငါသည် ကံသာလျင် မိမိဥစ္စာ ရှိသည်။
ကံသာလျင် အကြောင်းရင်း ရှိသည်။
ကံသာလျင် အမွေခံ ရှိသည်။
ကံသာလျင် အဆွေအမျိုး ရှိသည်။
ကံသာလျင် ကိုးကွယ်လဲလျောင်းရာ ရှိသည်ဖြစ်၏။
ကောင်းသည် ဖြစ်စေ၊ မကောင်းသည်လည်း ဖြစ်သော အကြင်ကံကိုပြုအံ့။
“ ကိုယ့်အလုပ်ကိုယ်လုပ် ”
ဇနီးကျင့်ဝတ် (၅) ပါး
တပည့်ကျင့်ဝတ် (၅) ပါး
ဓမ္မ စာအုပ်များ (15)
ပါဠိ ဘာသာပြန် (5)
ဗုဒ္ဓ သြ၀ါဒများ (2)
ထေရ၀ါဒ ဗုဒ္ဓဘာသာ (65)
ထေရ၀ါဒ မှတ်ကျောက် (11)
မေတ္တာရိပ်မှ နှုတ်ခွန်းစကား (3)
မြတ်ဗုဒ္ဓ သာသနာ (13)
မြတ်ဗုဒ္ဓ ဂေါတမ (5)
than htut on ပဋ္ဌာန်း (၂၄ ပစ္စည်း)
kyann kan kaung on အရှင်ဇ၀န (မေတ္တာရှင်) ရွှေပြည်သာ
amara on ပဋ္ဌာန်း၊ ဓမ္မစကြာနှင့် ပရိတ်ကြီး…
Ko Thant on ဆရာတော်များ၏ ဆုံးမသြ၀ါဒများ
mettayate on ပဋ္ဌာန်း၊ ဓမ္မစကြာနှင့် ပရိတ်ကြီး…
အရှင်ဇ၀န (မေတ္တာရှင်) ရွှေပြည်သာ
ပဋ္ဌာန်း (၂၄ ပစ္စည်း)
တရားအတုအယောင် "ဇင်" ၀ါဒ